﻿ ​मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
​मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
बुधबार ०८, जेठ २०७६
मानिसहरुले आफ्नो मोटोपनबाट छुटकारा पाउनका लागि धेरै तरिकाहरु अपनाउँछन् तर सफलता भने हाँसिल गर्न सक्दैनन् । तर खानपानमा यदि ध्यान दिने र नियमित व्यायम गर्ने हो भने सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ ।
यदी तपाई हप्तामा एक वा दुई पाउण्ड तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्रत्येक दिन ५०० क्यालोरी जलाउनु पर्छ । तौल छिटो घटाउने सबैभन्दा उत्तम तरिका भनेको धेरै एक्सरसाइज गर्नु र थोरै खानु नै हो । मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ?
यदि त्यसो हो भने यि कुराहरुलाई ध्यान दिनुहोस् :
१. छिटो तौल घटाउन छ भने खानामा नुनको मात्रा कम, चिनी एकदमै कम र चिल्लो कम गरेर खाने ।
२. दुग्धजन्य पदार्थहरु कम खाने ।
३. ताजा फलफूल, अण्डाको सेतो भाग, सागसब्जीहरु, माछा र चिल्लो कम भएका खाना खाने ।
१. फलफूल र सागसब्जीहरु पेटभरी खानुहोस
२. दैनिक ८ देखि १० गिलास सम्म पानी पिउनुहोस्
३. एकै चोटी धेरै खाना खानुको सट्टा दिनभरमा ५–६ पटक थोरै थोरै खाना खानुहोस
४. तारेको खानेकुराहरु, भात, आलु, ब्रेडहरु, पास्ता लगाएतका खानेकुराहरु कम खानुहोस्
५. आफुलाई व्यस्त राख्नुहोस यसो गर्दा तपाइलाई बोर लाग्दैन र खान मन लाग्दैन
१. आफुले खाने खानाहरुको बारेमा टिपोट बनाएर फुड जर्नल बनाउनुहोस ।
२. यदी तपाई आफ्नो तौल छिटो घटाउन चाहनुहुन्छ भने दिनको कम्तिमा पनि १ घण्टा सामान्य शारिरिक अभ्यास गर्नुहोस् । दैनिक गरिने शारिरिक अभ्यासले तपाईलाई फिट र स्लिम बनाउँछ । छिटो तौल घटाउन गरिने एक्सरसाइजहरु निम्न छन्
कार्डियो र स्टेन्थ ट्रेनिङ : कार्डियो एक्सरसाइजले तपाइलाई क्यालोरी जलाउन मद्धत गर्छ । दिनको एक घण्टा पसिना आउने गरि कार्डियो एक्सरसाइज गर्नाले तपाईलाई छिटो तौल घटाउन मद्धत पुग्छ ।
क्रयास डाइट : तौल घटाउनलाई डाइटिङ गर्नु सामान्य भइसकेको छ । क्रयास डाइटमा थोरै खानामा पनि धेरै पोषण हुन्छ यो भोकै बस्नुभन्दा थोरै भिन्न छ र चाडो तौल घटाउन सहयोग गर्छ । तर, यो तरिकाले कहिलेकाँही उल्टो हानी गर्न पनि सक्छ किनभने तपाईले तौल घटाएपछि तपाइले डाइटिङ बन्द गरेपछि फेरी तौल बढ्न सक्छ ।